Ukuhlaziywa kweFilimu: Ukusebenza kweJessica Chastain yoTywala - Iimuvi
Eyona Iimuvi UJessica Chastain uguqukela kwi-Assassin enotywala e 'Ava'
UJessica Chastain uguqukela kwi-Assassin enotywala e 'Ava'
UJessica Chastain ungene Ezi , eyalelwa nguTate Taylor.Ubume bokuzonwabisa
Ziziphi iipilisi zokutya ezifanelekileyo
Ukuthanda kwethu inkcubeko ngokudibeneyo kunye nababulali kuye kwazidlala kaninzi kwiscreen esikhulu. Ngamanye amaxesha kukwenza ubukrelekrele, ubukho bempembelelo, njenge Indawo yeGrosse emnyama okanye UJohn Wick , kwaye ngamanye amaxesha luphawu nje lokubulala abantu ngenxa yegazi. Ezi , Umzamo wamva nje womlawuli uTate Taylor, ujonge ukuba ngowokuqala, kodwa uhlala ekufumanisa kunzima ukufumana injongo ebalisayo.
Inkwenkwezi uJessica Chastain njengophawu olubizwa ngokuba yi-titular character, i-globe-trotting, i-black-ops assassin elwa nezinye iidemon ezinobuntu, Ezi uzibekela indawo enomdla, enika umlinganiswa ophambili ongabulali ngaphandle kokubuza kuqala ukuba ingaba ukufa kufanelekile na. Kulandelelwano lokuvula, njengoko i-wig-clad Ava ibonakala njengomqhubi kwisikhululo seenqwelomoya sase-Paris, sifumanisa ukuba ngumbulali ongenanceba, kodwa ukwanguye ofuna ukuthethelelwa ngezenzo zakhe. Phambi kokudubula ithagethi yakhe yokuqala, usomashishini onezothe kwaye okhohlakeleyo, ubuza ukuba ikhona into embi ayenzileyo. Ngebengandithumanga ukuba ubungandithumanga, utsho.
Amakhredithi alandelayo asebenza njengendawo yethu yokugcina umlilo ekhawulezileyo eAva, eyayiyeyona nto iphambili evotelweyo evotelwe ukuba ngoyena uphumeleleyo owaphuma kwimizila emva kwesiganeko se-DUI. Wajoyina umkhosi, wakhululwa ngokuhloniphekileyo kwaye wathatha iingalo kunye nombutho ongaqondakaliyo ongazange uchaze-konke esikwaziyo kukuba bathumela iAva kubantu emhlabeni wonke. Umphathi wakhe uDuke, wadlala ngegusto nguJohn Malkovich, ngoyise omeleyo kaAva, ozama ukuxolelanisa nosapho lokwenyani phakathi kwemishini. Yonke into iyincwadi encinci, eneenkcukacha zonke ezibonakala ngathi zikhona zokuchaza ukuba kutheni iAva iyile ndlela ayiyo. Kodwa ukumenza ukuba abe likhoboka lotywala elibuyisayo ongcakazayo owayelisoka lakhe eliqhelekileyo (eliQhelekileyo) ngoku uzibandakanya nodadewabo (uJess Weixler) ayibangeli mdla kangako okanye ixele iinkcukacha njengokuba ichaziwe.
Rhuma kwiNcwadana yeLindle Watch Watch
Emva kokuba i-mission eRiyadh ihambile, u-Ava ufumanisa ithagethi yombutho wakhe, ekhokelwa ngu-Colin Farrell's Simon, ngokungaqondakaliyo ofuna u-Ava ngaphandle komfanekiso. Icebo lisika phakathi kokunyanzelwa kokusebenza ngamandla kunye neAva's mopey imizamo yokuphinda aqhagamshele kunye nosapho, kubandakanya nomama wakhe (uGeena Davis ongasetyenziswanga). Ngalo lonke, Ezi Andiqinisekanga ukuba ngaba sisifundo somlinganiswa esicinga okanye i-movie yesenzo esigcweleyo, kwaye imovie ayikhe iyenze ingqondo yayo ngexesha lokufika komlo wokugqibela. Uyawuphendula lo mbuzo: Ngubani oza kuphumelela kumlo ophakathi kukaColin Farrell noJohn Malkovich? (Impendulo ayizukukothusa, kodwa iyakonyanyisa.)
AVA ★ ★
(2/4 iinkwenkwezi )
Yeluswa nguwe: UTate Taylor
Ibhalwe ngu: UMateyu Newton
Inkwenkwezi: UJessica Chastain, uJohn Malkovich, oqhelekileyo, uGeena Davis, uColin Farrell
Ixesha lokuqalisa: 96 imiz.
Ngaphandle kokuqhwalela kwebali kunye nesiqingatha sentliziyo ekhulayo, uChastain unika imovie yonke into. Ujongeke ngokungapheliyo, ngakumbi xa esilwa, kwaye uTaylor akamenzi abe nobukhazikhazi obugqithisileyo kuyo yonke indawo. Ekupheleni kohambo lukaAva, ubethwe phantsi, unegazi kunye nomxholo wokunxiba i-hoodie, kwaye kuyahlaziya ukubona inyathelo labasetyhini elikhokelayo elingafuneki libukeke lihle okanye linxibe izithende kwi-movie yonke. UChastain wenza konke okusemandleni akhe, naye, ngesikhuthazo esilinganiselweyo esinikwe uAva, umfazi okwaziyo ukubulala abantu abangama-41 ngemali kodwa ongakwaziyo ukumelana neebhotile kwiminibar yakhe. Kukho ibali elinyanzelayo apho, kodwa Ezi ayikaze ifikelele kuyo.
Ababulali banomdla wendalo kuba bayasivumela ukuba siphile ngokungathandabuzekiyo ngombono oyintsomi. Ngaba singabuthatha ngobumfama ubomi bomnye umntu? Kuya kuba njani ukukwazi ukwenza oko ngaphandle kwemvakalelo yokwenene okanye impembelelo? Ngelinye ixesha uDuke uxelela uAva ukuba ayeke ukubuza imibuzo ngezifundo zakhe, emkhumbuza, eyakho ayisosizathu sokuba kutheni. Okwakho kukwenza okanye ukufa. Kwaye kuyachulumancisa ukubukela uAva xa eyeka loo mibuzo kwaye ethatha umntu emva kwendoda. Kukho izinto ezithile ezinomdla entliziyweni yeli bali, kodwa ukungangqinelani kweskripthi kuthintela uTaylor ekubeni azivavanye ngokwenene.
Okwangoku, kwimizuzu engama-90 eqinileyo kwaye upakishwe ngokulandelelana okuhle ngokulandelelana, Ezi yenza ulonwabo olwamkelekileyo. Yiwotshi engenangqondo, kodwa ikwanomdla kunye neqela labadlali abathandekayo. Ukuba ngamanye amaxesha uziva ungaphelelanga, uhlobo olufana nesiqendu esilahlekileyo se Izibizo apho uSydney Bristow esiba likhoboka lamehlo elineglasi, oko akunamsebenzi ekugqibeleni. Iifoto zokugqibela zinobuqili, i-wink yokugqibela ebonisa ukuba le movie ibinokuba yintoni ngesikripthi esingcono, kwaye kukho elona xabiso lokwenyani kwi-B-list action movie ehambisa ngaphandle kwenyani kwiiyure ezimbalwa. Kwaye, nokuba kwenzeka ntoni, kuyanceda ukwazi ukuba izinto zihamba ngcono kuwe kunokuba zinjalo ngeAva.
Ezi iphumile ngoku kwimidlalo yeqonga nakwiVOD.
Hayi, uMat Damon akahambi e-Australia
Eyona ithiyori iqhelekileyo ye-5G kunye nendlela i-COVID-19 eyenze ngayo yonke le nto
Ngaba uTom Cruise usenokuphumelela i-Oscar? Ukuba Uyafuna, Ngoku Lixesha
'I-Bojack Horseman Yeyona nto inkulu, yeyona nto ingoyikiyo ehlabathini'
leliphi ixesha lokungabi nazintloni ngoku
indlala imidlalo umongameli wekhephu umdlali
Ezona zinto ziluncedo kakhulu kwizibini ezitshatileyo
iipilisi ezikunceda ulahlekelwe ngamanqatha esisu
ndibize ngegama lakho uhlahlo-lwabiwo mali